एप्पलले दियो यस्तो चेतावनी, आईफोनले पेसमेकरमा बाधा पुर्याउन सक्ने
काठमाण्डौ । एप्पल कम्पनीले आफ्ना स्मार्ट आइफोनहरुको प्रयोगले पेसमेकर (मुटुमा राखिने उपकरण) जस्ता मेडिकल उपकरणको सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीले आफ्नो सर्पोेट पेजमा हालै प्रकाशित गरेको सूचनामा पहिलेको सुरक्षा जानकारीलाई विस्तार गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। कम्पनीले आईफोनमा चुम्बक र रेडियो वेभहरु हुने...
काठमाण्डौ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका साथ एउटा चिज सधैँ साथ रहन्छ। त्यो हो चार्जिङ केबल। अनि उनीहरु जहिले पनि चार्जिङ प्वइन्टको खोजी हुन्छन् र जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ मोबाइल फोन चार्ज गर्न थाल्छन्। कतिपयले यस्तो पनि सोचिरहेका हुन्छन् कि कतै बारम्बार चार्जिङ प्वइन्टको खोजी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलोस्। यस्तो हुन सक्ला? पक्कै...
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सानादेखि ठूला सबै प्रकारका उद्योग, प्रतिष्ठान र कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसारको सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले ‘बिजप्लस’ प्लानहरु संचालनमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण देशभरका साना, ठूला सबै प्रकारका उद्योग धन्दा, कलकारखाना र व्यवसायले विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गर्नु परिरहेको...
काठमाण्डौ । एनसेलको सिमकार्ड भएका विद्यार्थीले अब आफ्नो आवश्यकताअनुसार विभिन्न विषयहरु कुनै पनि समय जहाँ भए पनि सजिलै अडियोमार्फत अध्ययन गर्न सक्ने भएका छन् । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ‘एनसेल अडियो क्लास’ सुरु गरेको छ जसअन्तर्गत विद्यार्थीले मोबाइल मार्फत पाठ्यक्रममा आधारित पाठहरु मोबाइलबाटै सुन्दै सिक्न सक्छन् । ...
जापानले बनायो मास्क लगाएका मान्छेको अनुहार चिन्ने प्रविधि
मानिसहरूको अनुहार चिन्ने प्रणाली विकास गर्ने जापानी कम्पनी एनईसीले मास्क लगाएका मानिसहरूको अनुहार चिन्नसक्ने एउटा नयाँ प्रविधि सुरु गरेको छ। यो प्रविधिको उपकरणले मानिसहरूको अनुहारको आँखाजस्ता मास्कले नछेकिएका भागलाई केन्द्रित गरेर हेर्छ। एक सेकेन्डभन्दा पनि कम समयमा यो प्रविधिले मानिसको पहिचान गर्नसक्छ र यसले ९९.९ प्रतिशतसम्म...
कर र राजश्व भुक्तानीका लागि लाइन बसिरहन नपर्ने, इसेवाले ल्यायो घरैबाट भुक्तानीको सुविधा
काठमाण्डौ । करदाताहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूको राजश्व इसेवादेखि नै दाखिला (भुक्तानी) गर्न सक्ने भएका छन् । अबदेखि करदाताले आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका कुनै पनि राजश्व कार्यालयको भ्याट, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा अन्य शेवाशुल्क इसेवाबाटै बुझाउन सकिने भएको हो । इसेवामा यो सेवा उपलब्ध भएसँगै राजश्व कार्यालयमा गएर लामो...
पीबीएस आइटी करियर कन्क्लेभ
काठमाण्डौ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासले हाम्रो शिक्षा, जीवन शैली र संस्कार नै परिवर्तन हुदै गइरहेको छ । अबको शिक्षा र व्यवसायीक करियरमा पनि सूचना प्रविधि अपरिहार्य झै बनिरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वमा देखिएको कोरोना भाईरसको संत्रासले हामीलाई अझ प्रविधिसँग नजिक बनाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाईरसको प्रकोपका कारण...
टेलिकमले सुरु गर्यो एनटी टिभी सेवा, एउटै तारबाट भ्वाइस, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवासमेत उपलब्ध
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले आज शुक्रबारदेखि (एनटी टिभी) ब्राण्डमा एफटीटीएच मार्फत आईपी टिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेलिकमले एफटीटीएच सेवाबाट भ्वाइस सेवा र डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा एनटी टिभी सेवा पनि उपलब्ध गराएपश्चात् (ट्रिपल प्ले) को अवधारणा कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गरेको हो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित...
मोटोरोलाको नेपालमा पुनरागमन, लोकप्रिय दुई स्मार्टफोन बजारमा
काठमाण्डौ । आफ्ना स्थापित जि र इ वर्गबाट दुईवटा नवीनतम र लोकप्रिय विश्वव्यापी उत्पादनहरूका साथ मोटोरालाले आज नेपालमा पुनरागमनको घोषणा गरेको छ। मोटोरोलाको नेपालमा पुनरागमन आफ्नो राष्ट्रिय वितरक (कल मोबिलिटी प्रा.लि. को साथमा भएको छ, जसको एउटा रोचक र साझा इतिहास छ। सन् २००७ मा, कल मोबिलिटीले नेपाली बजारमा रकआर, रेजआर र सि सिरिज जस्ता...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी विषम परिस्थितिमा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु गरिरहेको बुढानिलकण्ठ स्कुलले प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित ‘डिजिटल एडुकेसन आइसिटी अवार्ड २०२०’ प्राप्त गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई प्रदान...
तराई मधेश द्रूत मार्गमा नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकम र काठमाडौ­तराई÷मधेश द्रूत सडक आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने तुलनात्मक रुपमा निकै छोटो (७२.५ कि.मि.) मानिएको र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन सो सडकमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रावधानहरुसहित आयोजना र टेलिकमबीच गत पुस १० गते एक सहमतिमा...
स्मार्ट डोकोको अपडेटेड भर्सनको एप पुनः लञ्च हुँदै, अफरको बाढी
काठमाण्डौ । आइएमएस ग्रुपको लगानी पछि इ–कर्मश कम्पनी स्मार्ट डोकोले मोबाइल एप तथा वेभसाईटको नयाँ भर्जन अपडेटेड गरी पुन लञ्च गर्ने भएको छ । यस नयाँ अपडेटेड स्मार्ट डोकोले ग्राहकलाई विभिन्न सामानहरु खरिद गर्न थप सहजता प्रदान गर्ने कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । यही अवसरमा स्मार्टडोकोले “स्मार्ट डोको २०२१...
डिसहोम पल्सर स्पोर्ट अवार्डको मुख्य सह–प्रायोजक
काठमाण्डौ । यस वर्षको पल्सर स्पोर्टस अवार्डमा पनि डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड मुख्य सह–प्रायोजकका रुपमा रहने भएको छ । अवार्डको आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च र डिस मिडियाबीच बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा डिस मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य र मञ्चका महासचिव...
टेलिकमको जाडोमा न्यानो अफर
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच सेवाका ग्राहकका लागि एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर उपलब्ध गराएको छ । यस योजनामा २० एमबीपीएस वा सो भन्दा बढीको वार्षिक प्याकेज लिने एफटीटीएच सेवाका ग्राहकका मोबाइलमा दैनिक ३ सय एमबी डाटा एफटीटीएच–जाडोमा न्यानो अफर स्वरुप उपलब्ध गराइएको हो । यो अफर हिजो आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ...
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले अब आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर वा आफुलाई आवश्यक परेको जनशक्ति सजिलै खोज्न सक्नेछन् । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नयाँ सेवा ‘एनसेल जबसप’ शुरु गरेको छ । यो सेवाले रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्ने दुवै पक्षलाई एकै भर्चुअल प्लेटफर्ममा भेटाउने काम गर्दछ । एनसेलले आफ्नो हाल संचालनमा रहेको अभियान...